नगरपालिका सुस्त बन्दा अग्ला घर भत्किने – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नगरपालिका सुस्त बन्दा अग्ला घर भत्किने
भरतपुर । विमानस्थल क्षेत्रमा निश्चित उचाइका मात्रै घरहरु बनाउन पाइने नियमलाई नगरपालिकाले सुरूमै कार्यान्वयनमा नल्याउँदा अहिले थप समस्या बढेको छ । भरतपुर विमानस्थल नजिकका अग्ला घरहरु भत्काउन विमानस्थल प्रशासनले तयारी सुरू गरेपछि घरधनीहरु नगरपालिकाको स्वीकृतिमा बनेका घरहरु नहटाउने अडानमा बसेका छन् ।
वरपरका २५७ घरहरु मापदण्डभन्दा बढी उचाइका पाइएको भन्दै भरतपुर विमानस्थल कार्यालयले ती घरहरु हटाउने योजना बनाएको छ । मापदण्डभन्दा अग्ला घरहरुले हवाइ सुरक्षामा नै गम्भीर असर पार्ने विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख बच्चुराम श्रेष्ठ बताउँछन् । तर वर्षौदेखि घर बन्दै आएको ठाउँमा अहिले मापदण्ड लागू गर्न खोज्नु न्यायसंगत नभएको स्थानीय बताउँछन् ।
अग्ला घरहरु भत्काउने प्रशासनको कदम रोक्न स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । कुल २५७ मध्ये विमान स्थलको दक्षिणतर्फका स्थायी १५६ र अस्थायी १२ वटा भवनहरु मापदण्डभन्दा अग्ला भएको प्रतिवेदन हालै मात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।
ती घरहरु भरतपुर नगरविकास समितिले विसं. २०६५ सालको जेठ र साउनमा स्वीकृति दिएपछि जग्गा व्यवसायीहरुले प्लटिङ गरेर बेचेका घडेरीमा बनेका छन् । जग्गा व्यवसायीहरुको कम्पनी युनिक ग्रुप र गंगा प्रालिले त्यहाँको जग्गा प्लटिङ गरेको थियो ।
‘नगर विकासले प्लटिङ गरेर घडेरी बेच्न दिने । नगरपालिकाले घर बनाउन नक्सा पास पनि गर्ने । घडेरी सवै नबिक्दासम्म केही नगर्ने । प्लटिङ व्यवसायीले घडेरी बेचेर सकेपछि अनि अहिले घर अग्ला भए भनेर भत्काउन थाल्ने । अन्याय मात्रै यहाँ ठूलै षडयन्त्र भएको छ’ सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्यामकुमार गिरीले भने ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ र २ मा विमानस्थल वरपर बनाउन मिल्ने घरहरुको उचाइ र मापदण्ड तोकिएको छ । भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयले विसं. २०६३ सालको मंसिरमा मापदण्ड सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन प्रधान कार्यालयमा पत्रचार गरेको पाइएको छ ।
त्यसपछि विसं. २०६४ सालको फागुनमा विमानस्थल वरपर प्लटिङ हुँदैछ भन्ने जानकारी पनि भरतपुर विमानस्थल कार्यालयले प्रधान कार्यालयलाई गराएको थियो । प्रधान कार्यालयले तत्कालै भरतपुर विमानस्थललाई उडान सुरक्षामा असर नपर्ने गरेर निर्माण कार्यको नियमन र अनुगमन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
फागुन ३० मा प्रधान कार्यालयबाट त्यस्तो पत्र आएपछि भरतपुर विमानस्थल कार्यालयले विसं. २०६४ सालकै चैत्र १८ गते मापदण्डअनुसार नक्सा पास गर्न भरतपुर नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । भवन निर्माण तीव्र हुँदै गएपछि विमानस्थल कार्यालयले विसं. २०६५ सालको पुस २० र चैत्र ३० मा फेरि पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
भवन मापदण्डअनुसार नक्सा पास गर्न तीनतीन पटक विमानस्थल कार्यालयले पत्रचार गरे पनि नगरपालिकाले सुनुवाइ नगरेको अध्ययन कार्यदलले पत्ता लगाएको हो । पछिल्लो पटक पत्राचार भएको झण्डै आठ महिनापछि बल्ल नगरपालिकाले विमानस्थल कार्यालयलाई पत्र लेखेर नक्सा शाखाका प्राविधिकहरुलाई जानकारी दिलाउन आग्रह गरेको छ ।
विसं. २०६६ सालको मंसिर २५ मा नगरपालिकाले विमानस्थल कार्यालयलाई पहिलो पटक पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि पनि भवनहरु बन्ने क्रम कम भएन । विमानस्थल कार्यालयले गएको कात्तिक १३ मा फेरि नगरपालिका कार्यालयलाई पत्र लेखेर अग्ला भवन रोक्न तत्काल अनुरोध गरेको थियो ।
यो पत्रपछि गएको मंसिर २५ गतेदेखि भरतपुर नगरपालिकाले नक्सा पास कार्य रोकेको छ । ऐन बनेको १५ वर्षपछि र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विमानस्थल कार्यालयले ताकेता सुरू गरेको छ वर्षपछि बल्ल नगरपालिकाले सुनुवाइ गरेको छ ।
भवनहरु मापदण्डअनुरुप बनाउन नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दै विमानस्थल कार्यालयले पत्रचार सुरू गर्न थालपेछि नै नगर विकास समितिको स्वीकृति पाएर प्लटिङ भएको ठाउँमा अग्ला घरहरु बनेका छन् । नगर विकासलाई स्वीकृति दिने बैठकमा प्रमुख दल र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरु नै सहभागी थिए ।